Ina Dhuubo oo ku Qaday Denmark oo Qardhaas u Jaxaastay Jeebka Xoogsatada Australia – Rasaasa News
Oct 16, 2009 autralia, Ina Dhuubo, Jwxo-shiilada
Ina Dhuubo oo dhacii dhiigmiiradnimada ahaa ee uu ku joogay Yurub, hada ka bilaabay Australia, ka dib kolkii ay fahmeen dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayuu u qaxay Australia oo ka bilaabay in uu ka dhiigmiirateeyo dhalinyarada halkaasi ka xoogsata.
Ina Dhuubo oo ay da,adiisu haatan tahay 55 sano ayaan noloshiisii cunin shilin uu shaqaystay, waxaana uu dadweynaha Somalida Ogadeeniya ku ahaa dulin ku dul nool, waxaa uu shaqaale ka noqday Kaalinka 5aad muddo 5 bilood ah, xiligii Eebe Weyne naxriis ha siiye uu Cabdulahi Maxamed Sacdi madaxweynaha ka ahaa Kaalinka 5aad, xiligaas oo ayna xukuumada Tigray wax miisaaniyad ah siin maamulkaas.
Waxaa jirtay xili ay waxbarasho JXSG ugu soo dirtay dalka Suuriya arday uu ka mid yahay, waxaana uu joogay muddo 7 sanno ah mana jirto wax warqad markhaati ah oo uu ka qaatay, waxaase tacliintii ay baranayeen ka wadan waayey ardaydii isaga oo marka uu dhamaysto inta yar ee biilka ah, ardayda lacago been ah oo uu sigaar ku gato ka uruurin jiray. Waa nin aad u hadal badan oo yaqaan xirfadaha af ku xoogsiga, waana arintaas mida keentay in uusan waligii shaqaysan oo uu ku dulnoolaado dadweynaha isaga oo isaga dhigaya in uu dalka wax u qabanayo.
Waxaana uu ka bilaabaa arimahan dhinaca Haweenka, maadaama ay haweenku yihiin kuwa ugu calool nugul bulshada, waxaa ugu hoos jira arimo badan oo “saqajaan hoosaad” ah, waana arimihii dhawr goor oo hore loogu garaacay dalka Denmark, ilaa ugu dambayntii ay ka fahmeen dhamaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Arimaha ka soo caydhiyey dalka Denmark ayaa waxaa ay yihiin labo arimood; biilka caruurta oo aan ka baxsanaynin iyo bilcamaha oo uusan basarxumo kala dhamaan ayey dadweynuhu ku naceen.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ku nool dalka Australia ayaa ah dad xoogsato ah oo ay dalkii iyo dadkiiba muddo ugu dambaysay kuna nool qaarad aad uga fog dalka hooyo, waxayna dadku jecel yihiin ruux alaale ruuxa ugu dambeeya ee ka yimaada dalka, xitaa hadii uu ruuxaasi Yurub ka yimid waxay jecel yihiin in ay waraystaan oo ay wax ka dhagaystaan.
Dalka Australia waxaa hada ka hore ka hodmay oo xoolo badan ka aruursaday Mr Qaaxo, oo sida la sheegayo gabadha uu qabo ay ka Iibsatay Guri magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dadweynaha Somalida Ogadeeniya, hadii ay arkaan ruux dibada ka yimid oo wata lacag badan oo uu ku samaysanayo hanti, isma weydiiyaan meesha uu ka keenay ruuxani lacagta madaama ay jiraan dadkeen ah oo badan oo qurba joog ah, ee kaliya waxay yidhaahdaan “dibaduu ka yimid”.
Hadaba, dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee xoogsatada ka ah dalka Australia, waa in ay ka digtoonaadaan xoolo si khaldan iyaga laggaga tabcanayo, waxaa kale oo aanu uga digaynaa si gaar ah ninka aan kor ku sharaxnay in uusan duminin xaasaska qariibka ku ah dalkaasi ee iyaga laftigoodu gacan qabashada u baahan.
Ninkan isaga ah, waxaa uu ka mid yahay afarta nin ee ka dameeyey dilkii halgame Dr. Maxamed Siraad Dolal, oo ah ninkii ugu horeeyey ee u yimid qadyada Somalida Ogadeeniya xiligii gugga sanadkii 1994, isaga oo ka hor hadlay muddo 5 daqiiqo ah golaha Senidka ee dalka Australia.
Hadaba, arimaha uu idinkula wareegayo Ina Dhuuba waa arimo u gaar ah oo uu dhaqaale ku uruursanayo, mana jiraan wax ka jira waxa uu idiin sheegayo ee ah Jwxo ayaa u shaqeeyaa oo halgan baan wadnaa, halganku ma aha mid lagu laayo N/hurayaalka, ma aha mid dalka laggaga sheemi karo qof qori wata oo xabashi waxyeelaynaya, hadii aydaan maanta Ogayn waxa uu ku jiro Ina Dhuubo waxaad ogaan doontaan sanooyin ka dib.